Jowhar.com : Somali Leader News - News: Cabdi Qeybdiid "Tiro boqolaal ah oo Al-Shabaab firxad ah ayaa deegaanada Mudug soo gashay"
April 24 2014 22:47:25
Cabdi Qeybdiid "Tiro boqolaal ah oo Al-Shabaab firxad ah ayaa deegaanada Mudug soo gashay"
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Cabdi Xasan Cawaale (Qeybdiid) ayaa ka codsaday dowladda Soomaaliya iyo Beesha Caalamka in maamulkiisa laga gacan siiyo la dagaalanka Al-Shabaab oo ku soo qul qulaya deegaanada uu ka arimiyo maamulkiisa.
Cabdi Qeybdiid oo wareysi siiyay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa sheegay in tiro badan oo dagaalyahanada Shabaab ka tirsan oo ka soo firxaday deegaanada aagaga dagaal kaga furan yihiin ay soo galayaan deegaanada Mudug.
"Tiro aad u badan ayaa soo galay Mudug, anaga maadaama aan Gobolada Dhexe ka mid nahay, wax badan oo ka soo cararay meelaha laga saaray ayaa soo galay Gobolka Mudug, inay dagaalo ka bilaabaan ayaa suurta gal ah, qaar badan xabsiyada ayaa ku heynaa oo aan qabanay"ayuu yiri Cabdi Qeybdiid.
Madaxweynaha Galmudug Cabdi Qeybdiid ayaa ku qiyaasay tirada dagaalyahanada Shabaab boqolaal oo uu xusay in qaarkood ay u gudbeen buuraha Galgala ee dhinaca Puntland sida uu hadalka u dhigay.
"Waa boqolaal weeye, laakiin waxay u socdaan si qeyb qeyb ah, muuqaal ciidan kuma soo gelin, dhulka laga xoreeyay ayay mudooyinkan dhan ay ka soo qul qulayeen, waxaa ugu baaqeynaa Beesha Caalamka iyo dowladda in gacan nagala siiyo la dagaalanka Shabaab"ayuu yiri Cabdi Qeybdiid.
Waxaa uu sheegay in maamulkiisa aan awood u laheyn arrimaha socda, gaar ahaan qul qulka dagaalyahanada Shabaab, sidaas darteed ay lagama maarmaan tahay in maamulkiisa laga taageero dhinacyo kala duwan sida uu yiri.
Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa guluf dagaal ku qaaday deegaanada Shabaab ka maamulaan Gobolada Koofurta iyo Bartamaha, iyadoo laga saaray deegaano dhowr ah, waxaa ugu dambeysay shalay oo gacanta Shabaab ka baxday degmada Ceelbuur.
Taliska AMISOM ayaa sheegay in tiro badan oo dagaalyahano ay ku jiraan saraakiil ay aadeen dhinaca Buuraha Galgala oo saldhig weyn ay ku leeyihiin Al-Shabaab.
mahad on March 27 2014
Jowhar.com751,646 unique visits